Soo dejisan DVD PixPlay 8.01 – Vessoft
Soo dejisan DVD PixPlay
DVD PixPlay – software shaqaynaysa oo loogu tala galay in la files warbaahinta iyo saxannada shaqeeyaan. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan soo duubey kala duwan la qaabab loo jecel yahay ee image, video ama faylasha codka ah. DVD PixPlay waxaa ku jira tiro badan oo ah qalab si haggaaji saamaynta slideshow, size ama nooca qoraalka iyo u gudbid dhexeeya sawiro. Software waxuu si ay u qoraan mashaariic abuuray on CD ama DVD saxannada oo iyaga la geliyo adeegyada loogu jecel yahay YouTube ama Facebook. DVD PixPlay sidoo kale u ogolaataa in aad sawiro ku daro editor slideshow ka Camera ama scanner ah.
The set oo ah qalab si ay u abuuraan slideshow
Qor aad slideshow on disk
Support for qaabab warbaahinta caan ah
Comments on DVD PixPlay:
DVD PixPlay Software la xiriira:
Saxannada Agabka in ay la shaqeeyaan cajalladaha of qaabab kala duwan. Software taageertaa gurmad iyo soo kabashada ee xogta laga badiyay.
العربية, English, Українська, Français... AOMEI Partition Assistant 6 Standard, Professional iyo Lite
Saxannada Tool si ay u maareeyaan maqaal qoruhu disk adag. software waxaa ka mid ah qalabka si ay ula shaqeeyaan cajaladaha iyo wuxuu kuu ogolaanayaa inaad inuu Abuuro wax saxanno Downlaods.
English, Français, Español, Deutsch... Smart Defrag 5.3.0.976
Saxannada Agabka in defrag drives la tiro balaadhan oo ah muuqaalada waxtar leh. software wuxuu kuu ogol yahay in aad ka shaqayso hababka defragmentation oo ayna.
العربية, English, Українська, Français... Nero 2016 21.09.2015 Nero Burning ROM iyo 2016 17.09.2015 Classic
Saxannada software multifunction The si ay u qoraan iyo edit saxanno ah. software waxay leedahay Tilmaamo badan oo dheeraad ah si ay ula xogta saxanno shaqeeyaan.
English, Français, Español, Deutsch... MiniTool Partition Wizard 9.1 Home Edition iyo Professional Edition
Saxannada Tababaraha The awood leh drives adag shaqo-buuxa ah. software waxaa ka mid ah set oo ah qalab loogu talagalay shaqada fudud noocyada kala duwan ee drives.
Easeus Partition Master 11.9 Professional iyo Free
Saxannada Tool in ay la shaqeeyaan drives adag iyo sidayaal kale xogta. Software ka kooban yahay shaqo ah si ay u qariyaan oo muujiya xogta on disk ah.
Saxannada Software inay la shaqeeyaan cajalladaha ee noocyada kala duwan. Waxaa jira qalab si ay u qoraan, edit iyo nadiifiso xogta iyo sidoo kale in la abuuro images disk.
English, Français, Español, Deutsch... Auslogics File Recovery 7
Saxannada Software inuu ka soo kabsado ka files si qalad ah la tirtiro ama laga badiyay. Software waxay leedahay nidaam dabacsan oo raadinaya in xooga badbaadiyay markii on raadinta macluumaadka lagama maarmaanka ah.
Saxannada Tool in defrag ka drives adag oo ay tayadoodii nidaamka. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay ula kaararka xusuusta, drives kumbiyuutarka iyo aaladaha kaydinta kala duwan u shaqeeyaan.
English, Українська, Français, Español... MuseScore 2.0.3
Editor Audio Editor The dhamaystiran music oo ka mid ah dhibcaha muusikada la shaqeynayaan ballaaran. Software waxay siisaa badbaado ama download ka mid ah noocyada kala duwan ee xubno ka music la nidaam search sare.
العربية, English, Українська, Français... Amigo 47.5.2526.111
Kadib Browser waxaa u janjeedha in si shabakadaha bulshada oo caan ah ay helaan haboon. Sidoo kale software ah ula shaqeeyaa hawlaha adeeg ee Group Mail.Ru ah.
العربية, English, Українська, Français... Cookie Monster 3.47
Extensions Tababaraha cookies ayaa ka mid ah daalacashada caan ah. Software ayaa awood u tahay in la abuuro liiska cookies si looga hortago in ay ka saarida.
Opera 40.0.2308.90, 41.0.2353.30 beta iyo 42.0.2374 dev